FANOKAFANA NY FIVORIANA TSY ARA-POTOANAN’NY ANTENIMIERANDOHOLONA – Sénat de Madagascar
Araka ny didim-panjakana laharana faha-2019-028 mampiantso ny Antenimiera roa tonta hivory tsy ara-potoana, sy ho fampiharana ny andininy faha-76 sy 85 ao amin’ny Lalàm-panorenana dia mivory tsy ara-potoana araka ny lahadinika ny Parlemanta. Nisokatra ara-pomba ofisialy, ny Alatsinainy 12 Aogositra 2019, ny Fivoriana tsy ara-potoana Voalohany ho amin’ity taona 2019 ity teto anivon’ny Antenimierandoholona ary haharitra 12 andro.
Lanonam-panokafana teo ambany fitarihan’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO sy ireo mpikambana anivon’ny Birao Maharitra ary ireo Loholona rehetra. Notronin’ireo Filohana Andrimpanjakana rehetra, ireo mpikambana anivon’ny Governemanta izay notarihan’ny Praiminisitra NTSAY Christian, ireo Solombavam-bahoakan’i Madagasikara ary olo-manankaja maro Sivily sy Miaramila.
Ny Pôlitika ankapoben‘ny Firenena (PGE) izay tarihin’ny Praiminisitra NTSAY Christian sy ny momba ny tolo-dàlana mikasika ny Sata mifehy ny Antoko Mpanohitra eto Madagasikara no lahadinika hodinihana mandritra ity Fivoriana tsy ara-potoana ity.
Ny mahakasika ilay tolo-dalàna ho an’ny Mpanohitra dia miantso ny tokony hisian’ny ady hevitra sy ny tolo-kevitra avy amin’ny sehatra maro samihafa toy ny Antoko Pôlitika, ny Fiaraha-monim-pirenena, Mpitondra fivavahana ary ireo Mpandinika ny fiaraha-monina ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO. Taratry ny fisian’ny « Demôkrasia tena izy » ny fisian’ny Antoko Mpanohitra eo anivon ‘ny Firenena anankiray ary isan’izany isika eto Madagasikara. Fototra iray hahafahana mitondra fampandrosoana eo anivon’ny Firenena ny fisian’ny Lalàna momba ny « Fanoherana ».
Nambaran’ny Filohan’ny Antenimierandoholona ihany koa fa ny tsy fitovian-kevitra dia tsy natao hitarika disadisa sy ady fa tokony halala-tsaina sy hahay hiady hevitra ireo Parlemantera ka hatao anatin’ny fanajana ny lalàna sy fifanajana tanteraka ny lafiny fanehoan-kevitra ka tsy hijery afa tsy ny tombontsoam-pirenena.
Araky ny andininy faha-99 ao amin’ny Lalàm-panorenana dia manana 30 andro aorian’ny fijoroany ny Governemanta tarihin’ny Praiminisitra mitondra sy manazava ny Pôlitika ankapoben’ny Fitondràm-panjakana eny anivon’ny Antenimiera roa tonta. Isan’ireo Lahadinika anatin’ny Fivoriana tsy ara-potoana koa izany eto anivon’ity Andrimpanjakana Faharoa ity.
Ny Antenimierandoholona rahateo no Andrimpanjakana misolotena mivantana ireo Vondrombahoakam-paritra Itsinjaràm-pahefana araka ny andininy faha-81 ao amin’ny Lalàm-panorenana. Hisy araka izany ny tatitra hataon’ireo Loholona ireo any amin’ireo Vahoaka anivon’ny fari-piadidiana nihavian’izy ireo tsirairay avy.
Nandritra io fotoana io ihany koa no nanehoana ampahibemaso ireo Loholon’i Madagasikara vaovao eto anivon’ny Antenimierandoholona dia ny Loholona MAHALINY sy RANDRIAMANANJARA Philibert ary RANDRIAMANANTENA Vévé.
« FITSARANA AN-TAMPONY: NANATANTERAKA FIANIANANA NY TALE JENERALY VAOVAON’NY BIANCO
FAMOAHANA NY ANDIANY “ILO” ENAM MADAGASIKARA »